Zimbabwe Page 2 - The Japan Times
World	Nov 24, 2017
Mnangagwa the 'Crocodile' sworn in as Zimbabwe's new president
Emmerson Mnangagwa was sworn in on Friday as president of Zimbabwe in front of thousands of cheering supporters at Harare's national stadium, bringing the final curtain down on the 37-year rule of Robert Mugabe. Taking his oath of office, the 75-year-old known as "the Crocodile" ...
World / Politics	Nov 24, 2017
Zimbabwe's former President Robert Mugabe was granted immunity from prosecution and assured that his safety will be protected in his home country under a deal that led to his resignation, sources close to the negotiations said on Thursday. Mugabe, who had led Zimbabwe from independence ...
World / Politics	Nov 22, 2017
African leaders saw Mugabe as 'embarrassment' and wanted him to go, secret cable shows
African leaders were embarrassed by Zimbabwean President Robert Mugabe and already encouraging him to step down before the army began moves last week to oust him, according to a secret Zimbabwean intelligence cable seen by Reuters. The cable, dated Oct. 23 and written by someone ...
World / Politics	Nov 20, 2017
Zimbabwe's Mugabe poised to stand down after 37 years in power
Zimbabwean President Robert Mugabe has agreed to stand down after 37 years in power, CNN reported Monday, after he avoided any mention of resignation in a rambling national address Sunday night. A resignation letter has now been drafted, CNN said, citing sources familiar with his ...
Zimbabwe's ruling party ousts Robert Mugabe
The leaders of Zimbabwe's ruling ZANU-PF party met Sunday and agreed to dismiss President Robert Mugabe, the only leader the southern African nation has known since independence 37 years ago. An extraordinary meeting of the party's central committee convened to consider removing the 93-year-old following ...
National / Politics	Mar 7, 2016
Abe arranging for Mugabe, 92, to visit Japan for late-March summit ahead of Kenya TICAD
Prime Minister Shinzo Abe is arranging a visit to Japan by Zimbabwean President Robert Mugabe in late March for summit talks, government sources said Sunday. Abe is eager to strengthen ties with the 92-year-old president, who has been in power since the African country's independence ...
World / Politics	Dec 12, 2014
When veteran Zimbabwe leader Robert Mugabe sacked his vice-president in front of 12,000 baying party members last week, Emmerson Mnangagwa sat quietly in the crowd, a green baseball cap pulled low over his eyes. The man who stood to gain most from the departure of ...
World / Politics	Dec 3, 2014
Zimbabwe's Mugabe, with total control over succession, grooms wife to succeed him
Ninety-year-old Zimbabwe President Robert Mugabe is literally paving the way for his wife's ascent to power. In another sign of the first lady's growing clout, Harare residents awoke on Tuesday to a new street, Dr. Grace Mugabe Way, leading to the conference center where Africa's ...